Inotonhorera Bhegi vatengesi uye fekitori - China Inotonhora Bhegi Vagadziri
Zvikamu: jira, ribhoni, zipi, dhonza musoro, kupisa kwemagetsi aruminiyamu foil, Pearl donje, nezvimwe.
Mucheka: Jira reOxford, nylon, isina-yakarukwa jira uye polyester.
Structure: Rokunze rukoko chakagadzirwa isapinda unhani, izvo zvinogona kudzivirira permeation kana patsanura mukati tembiricha leakage. Iyo inopindirana inotora yakakwenenzverwa kuputira Pearl donje, kuitira kuti ibudirire mhedzisiro yekuwedzera kupisa kuchengetedza. Kazhinji, hukobvu hwe5mm hwakakwana (iyo ukobvu inogona kuwedzerwa zvinoenderana nezvinodiwa). Iyo yemukati layer yakagadzirwa neinodyiwa-giredhi yakachengeteka, isina-chepfu uye isina kunaka thermal kuputira aruminiyamu foil zvinhu, izvo zvisina mvura, oiri-chiratidzo uye zvakare inocheneswa kuti igare ichidziya.
Kushandisa: kuchengetedza kupisa, kunyanya kuchengetedza kupisa kwemasikati bhokisi, kubheka ketera, ketera, nezvimwe. Kune vanhu vanoshanda, inhau zvakare yakanaka kutora kudya masikati uye kudya chikafu chawakagadzirira zvakanyatso kugadzirisa chikafu. Zvakanakira: yakasimba, ine simba kusagadzikana, kwete nyore kupaza kana iri pasi pekuremerwa kwakanyanya kana kukanganisa. Uye yakanaka mapurasitiki nekusimba.
Nguva yekuchengetedza kupisa: kazhinji, nguva yekuchengetedza kupisa inenge maawa mana (zvinoenderana nevhoriyamu uye tembiricha yechinhu chekuchengetedza kupisa uye kugadzikana kwenzvimbo dzakatenderedza panguva iyoyo), yakanaka yekuvhara masikati bhokisi inobatsira kunonotsa nguva yekuchengetedza kupisa. uye kuwedzera nguva yekuchengetedza kupisa.
1. Geza zvasara muhomwe nguva dzose. Sezvo iyo yemukati isina mvura yealuminium pepa, unogona kuipukuta netauro nyoro, iyo inochengetedza nguva, Basa uye kunetseka.
2. Kunze machira anowachika, asi kuwacha kwemuchina hakukurudzirwe kudzivirira kukuvara kune yemukati yekupisa yekuisa aluminium pepa.
3. Nekuda kwetembiricha yakaderera yezvakatipoteredza mune dzimwe nzvimbo, iyo yemukati yekupisa yekuisa aluminium pepa ichave yakaoma uye nyore kukuvara. Kana bhegi rakapetwa, rinogona kudziirwa nekugocha keji. Nekuti thermal kuputira aruminiyamu foil inozove yakapfava kana yakatarisana nekupisa, nekudaro kurasikirwa panguva yekupeta kunogona kudzivirirwa.
1. Rambidza kutemwa kwezvinhu zvakapinza sekubata moto kana mapurojekiti.
2. Dzivisa kuve munzvimbo ine hunyoro kwenguva yakareba, kuti usapfupise hupenyu hwayo hwebasa.
3. Dzivisa kuratidzwa kwenguva refu kuzuva nemvura, kuitira kuti zvisakanganisa kupisa kwekuchengetedza.
Bhuruu Huru Simba Rinotakurika Rinotonhora Bhegi
Chigadzirwa Nhanganyaya Shengyuan Bhuruu yakakura inokwana foldable inotonhorera bhegi iguru hombe, iri nyore kutakura, yakasarudzika yekushisa yekuisa bhegi, iwe yaunogona kushandisa mukambi, pikiniki, dziva pati, konzati uye zhizha beach pati! Inogona kubata kusvika makumi maviri nemashanu emakani ezvamunofarira zvinwiwa uye ayizi cubes. Kana isiri kushandiswa, ino inotonhorera inotonhorera inogona kupetwa kusvika isingasvike 2.5 inches, inoenderana nekuchengeta mumasutukesi, makicheni kana masutukesi ezve emergency. Iine leakproof insulation, iri sarudzo yakanaka kwauri ...
Inotakurika Picnic Inotonhora Bhegi
Chigadzirwa Nhanganyaya bhegi rine hombe nzvimbo yekuchengetera uye kuputira mapedhi, saka haufanire kunetseka kuti mangani mamaira ekufamba nechikafu uye nezvinwiwa zvakasarudzwa. Isa mumatombo akaomeswa nechando kana mamwe mabhuru echando, uye zvinhu zvako zvinochengetwa zvakaomeswa nechando! Bhegi rekunze rekuchengetera bhegi rinogona kunyatso chengeta mabhodhoro ako emvura anoshandiswa zvakare nemikombe, nepo imba hombe iri yakakura zvekuti inokwana makani makumi matatu. The bhegi chando ane pakuvara zipi pamberi bhegi uye zipi rakavhara pabutiro Ba ...
Isiri-Yakarukwa Yakakura Inotakurika Inotakurika Inotonhorera
Chigadzirwa Nhanganyaya Aluminium foil inotonhorera bhegi rudzi rwemvura isina mvura uye bhegi-chiratidzo bhegi rakagadzirwa nesaga kugadzira muchina uchishandisa aruminiyamu foil rinoumbwa Pearl donje sechinhu, ine simba rakasimba tensile, kupesana kuramba uye kuunyana kwemishonga, inogona kuita chinoshanda chinoshanda mukupisa kupisa , saka inoshandiswa zvakanyanya mune dzimwe nzvimbo kuchengetedza kupisa uye kuchengetedza. Nebudiriro yeindasitiri yekubvisa. Yedu inoraswa kutora-kure inotonhorera bhegi yakapasa mhando yemhando yekuongorora mushumo uye ...
Oxford Cloth Diagonal Picnic Inotonhorera
Chigadzirwa Nhanganyaya Seanotungamira mukwikwidzi mumusika unotonhorera, ShengYuan inotonhorera bhegi inozivikanwa nekuda kwekugara kwayo, maitiro uye dhizaini dhizaini. Iyi inotonhorera bhegi ine ese mashandiro ekutakurika anotonhorera, isina mvura nylon shell, antibacterial lining, inoyevedza yakavharwa-sero kuputira uye chimiro chakareruka. Muchokwadi, saizi yayo inotangira pamatanhatu masere ekukura kwebhokisi remasikati kusvika makumi mana emakani ehukuru hwemhuri, uye kune akawanda mavara akanaka kusarudza kubva, iyo ingori icing pane keke. A custo ...